La Wadaag Sawir ahaan: Muuji, Guji oo Wadaag qoraalkaaga | Martech Zone
Jimco, Abriil 19, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan u helay in ay sameeyaan a buug saxiix la Beth Hayden at World Suuq-geynta Warbaahinta Bulshada, qoraaga Pinfluence: Tilmaamaha dhameystiran ee suuqgeynta ganacsigaaga Pinterest.
Mid ka mid ah qalabka ay Bet ku wadaagto buugeeda oo aad u fudud laakiin runtii weyn ayaa loo yaqaan La wadaag sida Sawirka. Waayo, a, anagana yar, waxaad jiidi karaan bookmarklet ah oo wuxuu galay aad toolbar browser dibna loogu badalo xigasho kasta image a shareable. Waa dhibic dhibic ah oo sahlan oo leh astaamo aad u yar… laakiin waa khiyaanada!
Waxaa jira waqtiyo kujira boggeyga markii aan rabo inaan qaato xigasho xayeysiis ah oo aan ka dhigo mid ka dhex muuqda jirka boostada. Tani waa hab fiican oo lagu sameeyo taas - ma ahan oo keliya i siinta sawir aan ku isticmaali karo qoraal kale oo loogu talagalay ku habboonaynta raadinta sawir, laakiin wax runtii ka dhex muuqda qoraalka ku jira boostada.
Haddii aad rabto wax xoogaa xoogaa adag, halkaas oo aad ku dari karto sawir asalka ah oo aad u habeyn karto wax soo saarka si aad u culus, Bet sidoo kale liisaska PicMonkey sida qalab tafatir sawir ah oo aad ku astaysto qoraalka.
Tags: beth haydenpicmonkeycufnaantawadaag sida sawir ahaan
Smartfile: Whitelabel Xalka Faylkaaga Weyn